Indlu kuphela i-80 m ukusuka elunxwemeni, igadi ye-wifi pool
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguMaría Dolores
Indlu yalungiswa ngokupheleleyo ngo-2021 kuphela iimitha ezingama-80 ukusuka kwezona lwandle zibalaseleyo eMarbella. Igadi yabucala ngokupheleleyo kunye nephuli. Inamagumbi amabini okulala aneebhedi ezimbini kunye namagumbi okuhlambela amabini (enye en-suite) kunye nebhedi eyongezelelweyo yesofa kwigumbi lokuhlala.
Indlu yethu ikwindawo yokuhlala ezolileyo ecaleni kolwandle ngasempuma yeMarbella kunye neekhilomitha ezi-6 ukusuka embindini. Yakhiwa ngo-1970 kwaye yahlaziywa ngokupheleleyo kumgangatho ophezulu ngo-2021. Ikhitshi ixhotywe ngokupheleleyo, inefriji enkulu, i-oven kunye ne-dishwasher. Igumbi lokuhlala line-air conditioning kunye nendawo yomlilo kwiinyanga ezibandayo.
Ukusuka kwigumbi lokuhlala kukhokelela kwiveranda egqunyiweyo kunye negadi yabucala ene-tumbunas yokuphumla. Kwiinyanga zasehlotyeni kukho nequla lokuqubha labucala (elimalunga ne-3 m ububanzi) lokupholisa okanye abantwana abaza kudlala xa bengekho elunxwemeni. Ishawari yangaphandle ingayisebenzisa xa ufika kwi-encuetra elunxwemeni nje imizuzu emi-2 yokuhamba.
Indlu inamagumbi okulala amabini aneebhedi ezimbini (150x200) enokufikelela ngokuthe ngqo kwipatio entle enelanga kusasa, kunye namagumbi okuhlambela amabini anokufudumala ibe yenye yawo en suite.
Indlu ixhotyiswe ngomabonakude wesathelayithi kunye ne-Intanethi. Imoto inokupakishwa esitratweni kufutshane nendlu ngokuqhelekileyo akukho ngxaki. Ivenkile ekufutshane imalunga nemizuzu emi-5 yokuhamba kodwa ungafika ngokukhawuleza ukuba uthatha ibhayisekile oya kuyifumana endlwini.
Kufutshane kakhulu (kwindawo ephakathi kweemitha ezingama-350) uya kufumana iibhari ezininzi zaselwandle apho unokutya, utye okanye usele.
Ukusuka eCostabella kunokuthatha uhambo lwemini ukuya eGibraltar, Seville, Cordoba naseGranada.
Siyathemba ukuba uhlala kwindlu yethu elunxwemeni, sihlala kufutshane kakhulu ngoko sibhetyebhetye kakhulu ekujongeni kwaye sijonge kwaye sikuncede kuyo nayiphi na into oyifunayo.
indawo ezolileyo kakhulu ngakulwandle lwezindlu zabantu, kufutshane kakhulu uya kufumana imivalo eyahlukeneyo yaselwandle
Umbuki zindwendwe ngu- María Dolores
Somos un matrimonio joven y nuestra gran pasión es viajar, pretendemos que nuestros huéspedes se sientan como en su propia casa, cuidando cada detalle. Vivimos muy cerca por lo que estaremos encantandos de ayudarles en cualquier cosa que necesiten durante su estancia.
Somos un matrimonio joven y nuestra gran pasión es viajar, pretendemos que nuestros huéspedes se sientan como en su propia casa, cuidando cada detalle. Vivimos muy cerca por lo que…
Sihlala kufutshane kakhulu ukuze sikuncede ngayo nantoni na oyifunayo
UMaría Dolores yi-Superhost
Inombolo yomthetho: VFT/MA/43780